Ahoana ny fanavaozana ny macOS Mojave | Avy amin'ny mac aho
Efa eo amintsika ny kinova farany an'ny macOS Mojave, kinova vaovao izay manolotra antsika ho zava-baovao lohahevitra maizina, lohahevitra maizina ahafahantsika mampihetsika sy manafoana araka ny filantsika. Ny zava-baovao iray hafa dia hita ao amin'ilay safidy mamela antsika hametraka ireo antontan-taratasy rehetra mitovy endrika amin'ny birao misy ny solosaintsika.
Ny zava-baovao iray, izay mety hahatonga adala mihoatra ny iray, dia ao amin'ny fanavaozana ny rafitra. Miaraka amin'ny fanavaozana ny Mac App Store, fanavaozana ny rafitra tsy misy intsony izy ireo amin'ny alàlan'ny fivarotana app Apple. Miaraka amin'ny macOS Mojave, hanavao ny rafitra dia tsy maintsy mankany amin'ny System Prefers isika.
Miankina amin'ny kapila mafy ananan'ny fitaovantsika (HDD na SSD), ny ora fametrahana ireo fanavaozana mety maharitra mandritra ny androm-piainana na minitra vitsy monjaNoho izany dia misafidy ny hanao azy ireo foana isika rehefa fantatsika fa tsy hampiasa ny fitaovantsika isika, indrindra raha kapila mafy no mitantana azy.
Mba hanavaozana ny macOS Mojave, isaky ny mamoaka fanavaozana vaovao i Apple, dia tsy maintsy mankany aloha isika Taratasy rafitra.
Tsindrio avy eo Fanavaozana ny lozisialy.
Manaraka izany, hiseho ny varavarankely mampahafantatra antsika raha manana fanavaozana vaovao hapetraka isika. Raha izany dia hanolotra antsika ny safidy Vaovao farany izao. Amin'izay fotoana izay dia haseho ny haben'ny fanavaozana sy ny fotoana fampidinana antenaina, fotoana izay hiankina amin'ny hafainganan'ny Internet.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, raha kapila mafy mekanika no mitantana ny Mac antsika, tsy tokony hatao ny manamarina ilay boaty Tazomy hatrany ny datin'ny Mac anao, ary tompon'andraikitra amin'ny fisintomana sy fametrahana ireo fanavaozana isaky ny misy ny ekipa, na inona na inona ilainay na tsia ny ekipa miasa na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fanavaozana ny macOS Mojave